Warbixin: Janaale oo qaaday dhabihii hormarka & doorka guddoomiye Najah | Najah Media Network
Bogga Hore Maqaalo Warbixin: Janaale oo qaaday dhabihii hormarka & doorka guddoomiye Najah
Warbixin: Janaale oo qaaday dhabihii hormarka & doorka guddoomiye Najah
Janaale waa deegaan hodan ah oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose, wuxuuna caan ku yahay wax soo saarka beeraha, sida dalagyada & qudaartada qeybaheeda kala duwan.
Waxaa sidoo kale Janaale dhex-mara webiga Shabelle oo ay si aad ah uga faa’iideystaan beeraleyda deegaanka.
Ciidamada xoogga dalka ayaa Janaale maleeshiyada Al-Shabaab kala wareegay 16-kii March ee sanadkan 2020-ka, kadib markii ay ku qaadeen weeraro dhowr jiho ah.
Kadib waxaa sii aayar ah u soo noqonayey adeegyada aas-aasiga ah ee bulshada, sida caafimaadka, waxbarashada iyo ganacsiga.
Kadib markii laga saaray cadowga Al-Shabaab Janaale wuxuu is-bedal ku yimid muuqaalkii deegaanka, iyadoo maamulka gobolka Sh/Hoose iyo shacabkuba ay ka sameeyeen dadaallo horumarineed oo dib loogu soo celinayo quruxdii ay laheyd Janaale.
Is-bedalka goobaha laga dareemayo waxa ka mid ah dhirta qurxoon ee Janaale oo lagu sii dadaalayo, dhismaha deegaanka oo marba marka ka dambeyso la sii casriyeynayo, ganacsiga oo sii ballaaranayo iyo goobaha dalxiiska oo la sii hormarinayo.
Ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya kuwa AMISOM ayaa sugaya amniga guud, kuwaas oo marar badan ka hortegay weeraro naf la caari ah oo ay soo qaadeen dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab.
Ciidamada huwanta ayaa fariisimo ku leh duleedka deegaanka, halkaas oo ay kala socdaan dhaq-dhaqaaqa guud.
Janaale waxa ay leedahay xarumo caafimaad oo dadweynaha loogu adeego, sida MCH oo shaqo fiican u qabta bulshada kuwooda nugul, kaas oo uu dhowaan kormeer ku tegay guddoomiyaha maamulka gobolka Shabeelaha Hoose iyo mas’uuliyiin kale.
“Waxaan kormeer guud ku sameynay MCH-ka deegaanka oo ay shaqa fiican ka socotay mashaariic hor leh ayaan ka fulin doona Janaale si aan u hormarin adeegyada bulshadda.” ayuu yiri Madaale Najah.
DOORKA GUDDOOMIYE NAJAH
Guddoomiyaha maamulka gobolka Shabeelaha Hoose, Mudane Ibrahim Adan Ali (Najah) oo tan iyo markii dib loo xoreeyey Janaale isku howlay inuu ka shaqeeyo horumarinta deegaanka ayaa ka sameeyey mashaariicyo horumarineed oo kala duwan.
Najah oo kaashanaya xubnaha maamulka gobolka Shabeelaha Hoose ayaa dib u dhis ballaaran ku sameeyey buundada iyo Kanaalada Janaale oo dib u dayactirkeeda la soo gaba-gabeeyey kowdii bishii la soo dhaafay Augusto ee sanadkan 2020-ka.
Dib u dhiska lagu sameeyey buundada iyo kanaalada waxaa si aad ah haatan uga faa’iideysanaya dadka deegaanka oo si mug-leh ugu mahadceliyey Madaale Najah.
Maamulka gobolka Shabeelaha Hoose iyo kan Janaale oo is-kaashanaya ayaa dib u soo celiyey ciyaaraha kubadda cagta ee ay caanka ku aheyd Janaale.
KOOXAHA CIYAARAHA JANAALE
Kooxaha ka dhisan deegaanka oo la’isku abaabulay ayaa waxaa loo qabtay tartan xiiso badan, kaas oo uu daah-furay guddoomiye Ibrahim Adan Ali (Najah).
XIISAHA DADWEYNAHA IYO ISBOORTIGA.
Tartankan oo u jeedadiisu aheyd is-dhexgalka bulshada ayaa intii u socday waxaa u soo daawasho tagi jiray boqolaal shacab ah oo ka mid ah dadka deegaanka, kuwaas oo kala taageerayey kooxaha ka dhisan xaafadaha Janaale.
Gabagabada tartankan oo ay isugu soo hareen illaa saddex kooxood ayaa waxaa abaal-marino qaali ah guddoosiiyey guddoomiyaha maamulka gobolka Shabeelaha Hoose oo soo xiray tartankaasi, wuxuuna sheegay inuu sii socon doono.
NAJAH, CIIDANKA AMNIGA IYO CIYAARTOYDA JANAALE
Kaliya intaasi kuma eka dadaalka guddoomiye Najah ee Janaale, wuxuuna sidoo kale dhagax dhigay xarunta maamulka deegaanka, si loogu adeego dadweynaha.
Najah ayaa xusay in si deg-deg loo dhisi doono xarunta deegaanka oo muhiim u ah dhammaan howlaha socda.
DHAGAX DHIGA XARUNTA JANAALE
“Waxaan si rasmi ah u dhagax dhiggay dhismaha xarunta maamulka deegaanka Janaale oo si deg-deg ah aan u dhisi doono.” ayuu yiri guddoomiyuhu.
Janaale oo ku wacan Dalxiiska ayaa hadda dhabaha saartay jidkii horumarka, iyada oo hayinka u heyso deegaanada la midka ah ee ku yaalla gobolka Shabeelaha Hoose.
Maqaal horeShuruudaha Musharaxiinta Labada Aqal iyo Ergooyinka oo la shaaciyey
Maqaal XigaSawirro: Madaxweyne Deni oo u amba-baxay dalka Kenya